Tartanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo dib u bilaabmi doona – Radio Damal
Tartanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo dib u bilaabmi doona
Kooxaha Premier League-ga ayaa shir ay shalay ku yeesheen internet-ka oo maqal iyo muuqaal ahaa waxay kaga wadahadleen qaabka loo soo gabagabeyn lahaa xili ciyaareedka 2019/2020 ee haatan socday.
Waxyaabaha laga wada hadley ayaa waxaa ka mid ah in kulamada dhiman lagu qabto garoomo dhexdhexaad ah intii taageerayaashu tagi lahaayeen hadba garoon.
Qorshaha waxaa ka mid ah in ilaa 10 garoon lagu qabto horyaalka marka dib loo bilaabo ayaa lagu yidhi warar ka soo baxay kulankaasi.
Premier League-ga ayaa sidoo kale u baahan doona illaa iyo 40 kun oo qalabka baaritaanada si ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxaha loogu sameeo baaritaan haddii ay noqoto si loo dhamaystiro 92 ciyaarood ee dhiman, kuwaasi oo lagu ciyaari doono garoomo albaabadu u xiran yihiin oo aan loo ogoleyn taageerayaasha.
Kooxaha ayaa muujiyey inay ka go’antahay dhameystirka horyaalka marka baa la yiri ay noqoto “badbaado iyo inay quman tahay in sidaasi la sameeyo”.
Kulankan ayaa daba joogay kulan gaar ah oo uu marti galiyey wasiirka dhaqanka UK kaasi oo ay qayb ka ahaayeen khubaro caafimaad oo ka socday ururo kala duwan oo cayaaraha, dawlada iyo hay’adda caafimaadka dadweynaha u qaabilsan Ingiriiska, iyadoo lagu qaadaa dhigay hirgalinta qorshe dib loogu bilaabayo munaasabadaha cayaaraha.
Wakiilo ka socday xidhiidhada kubadda cagta, Rugby-ga, Cricket-ka, orodadda iyo hay’adda maalgalisa ciyaaraha UK ayaa sidoo kale iyaguna qayb kahaa kulankaas.
Wasiirka dhaqanka ayaa kulankaasi ku soo bandhigay kulanka sida tartamada ciyaareed ee waa weyn dib loo bilaabi doono iyadoo lagu ciyaarayo garoomada oo albaabadu u xiran yihiin, laakiin marka ay noqon doonto waxay ku xiran tahay talooyinka qubarada caafimaadka.
Qaybata cayaaraha ee BBC-da ayaa fahamsan in qaybaha ciyaaruhu aqbaleen in dib loo bilaabo tartamada ay noqon doonto qorshe dheer oo sharaxaad huwan, iyadoo wadaxaajoodkii Jimcihii badi lagu lafa guray dib u bilaabida tababarrada.
Tartanka gawaarida ee F1 wakiilo ka socday ayaa sidoo kale ka wada xaajooday mustaqbalka tartanka baabuurta ee British Grand Prix.
Masuuliyiinta Premier League-ga ayaa warsaxaafadeed ku sheegay in tababarada lagu soo laaban karo oo kaliya iyadoo la raacayo hab raaca dawlada.
“Waxaa la isku afgartay in ururka ay leeyihiin ciyaartoyda ee PFA iyo kan tababarayaasha ee LMA, ay xudun u noqon doonaan qorshahan isla markaana lala sameyn doono wadatashi dheeraad ah” ayaa lagu xusay warsaxaafadeedka ka soo baxay maamulka Premier League-ga.
Horyaalka Ingiriiska ayaan la hakiyey 13-kii March, iyadoo kooxda Liverpool ay ku hogaaminaysay xilligaas horyaalka 82 dhibcood, waxaana u dhiman 2 guul oo kaliya inay ku guulaysto Premier League-ga markii ugu horreysay muddo 30 sano.
Xubno ka tirsan kooxsa FC Cologne ee Jarmalka oo laga helay fayraska korona
Saddex xubnood oo ka mid ah kooxda Cologne ee ka ciyaarta horyaalka Bundesliga Jarmalka ayaa laga helay fayraska corona, sidaasi waxaa lagu xaqiijiyey war ka soo baxay kooxda, waxaase kooxdu ay sheegtay in ay sii wadi doonto tababarka ciyaaryahanada, sida la qorsheeyey.
Kulamada Bundesliga-ha ayaa sida qorshuhu yahay ah tartanka ciyaareed ee ugu weyn ee Yurub ee ugu hooreeya in dib loo bilaabo.
Maamulayaasha horyaalka Jarmalka ayaa daboolka ka qaaday in dib loo dhigay dib u bilaabashada horyaalka ee horey loo iclaamiyey 9-ka May, balse dawlada ayaa dib ugu dhigtay 16-ka May ama 23-ka May.
Warsaxaafadeed ka soo baxay kooxda Cologne ayaa lagu sheegay in dadka laga helay cudurka ay ku jiri doonaan is karantiimayn 14 maalmood ah.
Khamiistii Ra’isalwasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in go’aanka dib u bilaabida horyaalka Bundisligaha la qaadan doono maalinta Arbacada ah ee 6-da bisha May.
Horyaalka Jamralka ayaa hakad ku jira tan iyo bartamihii March taasi oo ay u tahay sabab faafitaanka cudurka Covid19.
Kooxda Cologne ayaa ku jirta kaalinta 10-aad eek ala horreynta horyaalka.